IWestern Cape iseyisifundazwe sobandlululo - Mantashe | News24
IWestern Cape iseyisifundazwe sobandlululo - Mantashe
Cape Town – Konke kumi ngomumo ngomcimbi womgubho weqembu elibusayo i-African National Congress leminyaka engu-103 ozoba seCape Town ngokusho kukaNobhala Jikelele waleli qembu uGwede Mantashe.
“Ngemuva kwezigigaba zodaba lokusebenzisa inkundla yaseCape Town sigcine siyisayinile inkontileka ukuze sikwazi ukuqhubeka nomgubho wethu,” kusho uMantashe ekhuluma nezintatheli kwingqungqthela yabezindaba eCape Town.
I-ANC kuphoqeleke ukuba ikhokhe imali elinganiselwa ku-R2.2million ngaphambi kokuthi isebenzise le nkundla kulo mcimbi ozoba ngoMgqibelo mhlaka 10 kuJanuwari.
OLUNYE UDABA: Inkosi yaBaThembu izohambela umcimbi we-ANC
UMantashe uzwakalise ukunengeka ngendlela idolobha laseKapa elisingathe ngayo udaba lokusetshenziswa kwale nkundla yi-ANC.
“IWestern Cape kuseyisifundazwe esinobandlululo uma i-DA isiphatha ngale ndlela,” kusho uMantashe.
Imigubho yaleli qembu izoqala ngoLwesine lapho kuzoba nomcimbi wokusikwa kwekhekhe okuwusuku okwabunjwa ngalo leli qembu 8 Januwari bese kuthi ngoLwesihlanu kube nomcimbi wesidlo sakusihlwa wokuqoqa izimali eCape Town International Convention Centre.
NgoMgqibelo kuzoba wumcimbi omkhulu ovuleleke wonke umuntu enkundleni yezemidlalo okuzokhuluma kuwona uMengameli waleli qembu uJacobo Gedleyihlekisa Zuma.